Isikhululo seoyile sePetroli sokuQokelela uMrhumo weNkqubo: uKhuphiswano lweDynamics kunye ne-Global Outlook 2025
Isikhululo seoyile seLizwe iVeteroli yokuQokelela iNkqubo yokuPhuma kweNgxelo yeMarike ibonisa ukujonga ngokubanzi kunye nokufundisisa okunzulu kweSitishi seoyile sePetroli sokuQokelela iNkqubo yokuThengisa iMarike ukufezekisa ukuqonda konke kunye nobukrelekrele beshishini kwintengiso ngezeMali nezoShishino ...
Umahluko phakathi kwamalaphu ahlukeneyo, Kutheni le nto amaLizwi eAntistatic ekhetha iPolyester?
Umqhaphu uqhelene ukubizwa ngokuba ngumqhaphu. Ifayibha isetyenziselwa ukwenza ilaphu kunye ne-quilt. Ifayibha yomqhaphu inamandla aphezulu, ukungena komoya okuhle, ukunganyangeki kombimbi kunye nepropathi eqine kakubi; inokumelana kakuhle nobushushu, yesibini kuphela kwi-hemp; inokumelana ne-asidi ehlwempuzekileyo, kwaye iyamelana nokunyibilikisa ialkali kwi-r ...
Isikhokelo esifutshane kumalaphu eAntistatic
Isikhokelo esifutshane kumalaphu eAntistatic Kule minyaka idlulileyo ndiye ndacelwa ukuba amalaphu ethu achasene no-static, conductive, okanye dissipative. Lo inokuba ngumbuzo onzima ofuna ikhosi emfutshane kubunjineli bombane. Kwabo bethu ngaphandle kwelo xesha longezelelweyo sibhalile eli nqaku lebhlog li ...
Amalaphu ama-5 abangela ukuba iStatic seBusika siBi kakhulu
Rhoqo ngoNovemba ukhupha isiketi sakho osithandayo esisebenza kunye nejezi njengoko esenza iblawuzi ebomvu. Kodwa ngezinye iintsuku umoya uphakama esinqeni sakho okwesibini uphuma phandle. Iindaba ezimbi: Une-tuli. Ukunqanda nakweyiphi na imeko ye-flasher ngengozi, nazi amalaphu amahlanu ...